Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Kadhacay Gobolka Shawa oo Ciidanka Wayaanaha Lagu Wiiqay.
Dagaal Kadhacay Gobolka Shawa oo Ciidanka Wayaanaha Lagu Wiiqay.
Posted by Dulmane	/ May 2, 2017
Wararka naga soo gaadhaya woqooyiga Gobolka Shawa ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya in dagaalo culus oo udhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidanka wayaanaha ay kadhaceen deegaano katirsan Gobolka Shawa.
Sida warka aan kuhelay ciidanka gumaysiga Itoobiya ee dhiiga shacabka ku halaaqay ayaa weerar kuqaaday beeralayda Axmaarada ah ee kudhaqan Gobolka Shawa halkaas oo ay doonayeen in ay hubka dhigis kusameeyeen beeralayda.
Beeralayda Axmaarada ee kudhaqan woqooyiga Gobolka Shawa ayaa lasheegayaa in ay sifiican isu difaaceen iyagoo markay arkeen weerarka kusocda lasoo baxay hubkooda, isla markaana sutida uqabtay ciidanka wayaanaha.
Taliska wayaanaha ayaa go’aamiyay in hubkadhigis lagu sameeyo shacabka kacdoon wadayaasha ah waxaana qorshayaasha taliska kamid ahaa in ay dadka kudhahaan waan ka iibinaynaa qofkii hubkiisa sooxareeya iyo waxaan siinaynaa mansab dowli ah oo uu kushaqaysto waxaana lasheegayaa in taliska wayaanuhu uu kufashilmay dhamaan sku dayadaas.
Warka ayaa intaas kudaraya in talaabadii ugu dambaysay ee taliska wayaanuhu uuqaatay ay ahayd in weerar lagu qaada shacabka isla markaana xoog lagaga soo uruuriyo hubka ay shacabku sitaan.
Dhinaca kale ciidanka wayaanaha ayaa bandow kusoo rogay dhamaan magaalooyinka woqooyiga Gobolka Shawa, waxaana lasheegayaa in ay ciidanka gumaysigu ka hortagayaan kacdoon shacab oo halkaas kasoo cusboonaaday.
Sikastaba ha ahaatee weerarkii ay ciidanka wayaanuhu kuqaadeen woqooyiga Gobolka Shawa ayaa lasheegayaa in ay jab wayn kala soo kulmeen isla markaana ciidankii halkaas tagay lasoo qabjabiyay.
Wixii war ah ee dagaalkaas kasoo kordha kala soco ONA.